Mas’uuliyiinta Manchester United oo kulan la yeeshay Wakiilka Gareth Bale – Gool FM
Mas’uuliyiinta Manchester United oo kulan la yeeshay Wakiilka Gareth Bale
Haaruun October 3, 2016
(Madrid), 03 Okt 2016 –Xidigga Garabka uga ciyaara kooxda Real Madrid, Gareth Bale ayaa waxaa soo baxaya warar si weyn ula xiriirinaya in xilli ciyaareedka soo socda uu ku biiri doono kooxda Manchester United ee Waddanka Ingiriiska.
Jonathan Barrett oo ah Wakiilka ciyaaryahan Bale ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxa uu kulan qarsoodi ah la yeeshay madaxda kooxda Manchester United oo uu ugu horreeyo tababare Jose Mourinho iyo Guddoomiye ku xigeenka dhinaca fulinta kooxda Ed Woodward sida uu qoray website-ka caanka ah ee ‘Diario Gol’.
Dhinaca kale Warku wuxuu intaa ku darayaa in 27 jirkan u dhashay Wales ay Real Madrid doonayso in ay heshiiska u kordhiso halka sidoo kalena shirkadda qalabka isboortiga ee labada Naadi ee Man Utd iyo Real Madrid kula jirta heshiiska ee Adidas-na ay doonayso in Bale u wareego Manchester.
Laacibkan ayaa waagii uu u ciyaari jiray Tottenham si aad ah loola xiriirin jiray kooxda Manchester United, balse taasi ma dhicin waxaana lacag aad u fara badan uu ugu wareegay Real Madrid.
Man Utd hold secret talks with Gareth Bale’s agent (via @SFootball #RedDevils) https://t.co/MCuiTcQR11
— jordan rip bushell (@jordanbilton) October 3, 2016
Daaficii hore ee Cameroon Rigobert Song oo Isbitaalka la dhigay Koomana ku jira
Andros Townsend oo lagu bedelay booska Raheem Sterling oo dhaawac looga saaray liiska xulka qaranka Ingiriiska